KYAT88 | Under Maintenance
Maintenance has been extended due to some unforeseen circumstances. We are currently aiming to complete the maintenance as soon as we could. We apologize for any inconvenience caused. Should you have any inquiries, please contact our customer service.
တန်ဖိုးထားရပါသောကာစတာမာများခင်ဗျာ၊, ကြိုမြင်နိုင်သောအခြေအနေများကြောင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပြုပြင်ခြင်းအားအချိန်တိုးမြှင့်ထားပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြီးစီးစေရန်ကျွန်တို့ဘက်မှကြိုးစားနေပါတယ်။ အဆင်မပြေမှုများအတွက်အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ အသေးစိတ်မေးမြန်းလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကာစတာမာဆားဗစ်သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။.
Dear Valued Customers, the site is under maintenance, we apologize for any inconvenience caused. Should you have any inquiries, please contact our customer service center.
တန်ဖိုးထားရပါသောကာစတာမာများခင်ဗျာ၊,ယခုသင်ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားနေသောစာမျက်နှာမှာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်နေပါတယ်။ အဆင်မပြေဖြစ်မှုအတွက်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ရှိပါကကျေးဇူးပြုပြီးကာစတာမာဆားဗစ်စင်တာဖြစ်သည့်.
© KYAT88. All Rights Reserved.